Arlette Ramaroson, raha nanontaniana ny heviny mikasika ny antony hitazomana sy nampiantsoana ho eny amin’ny borigady misahana ny heloka bevava eny Anosy ireo mpanao gazety nitati-baovao momba ilay resaka angidimby nihaodihaody teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny faran’ny herinandro teo. Raha tsy nisy izay dia tokony havoaka ireo mpanao gazety nanao ny asany. Tsy vitan’ny resaka fanitsiana amin’ny alalan’ny “démenti” ve, hoy izy, io resaka io fa tsy maintsy hasarotina tahaka io ? Ho sosotra amin’io zava-mitranga io ny olona kanefa ny Papa ho avy ary tokony hila filaminana. Ho gaga eo daholo ny any ivelany rehetra, hoy hatrany ity mpahay lalàna ity. Tokony havoaka daholo mihitsy izay voakasik’io raharaha io rehetra. Hisy fiantraikany amin’ny fivahinianan’ny Papa raha tsy milamina amin’io ny saim-bahoaka kanefa sady tsy “crime” no tsy “délit” ihany koa, hoy hatrany ny fanazavany, ilay zava-nitranga tokony ho vitana “démenti”.